Omem-boninahitra Ny Olona Any Armenia Rehefa Manana Voromailala Tsara · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Marsa 2018 5:33 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, Español, Ελληνικά, русский, Deutsch, Català, English
Ashot Metsoyan, ghushbas 65 taona any Gyumri , manome sakafo ny voromailalany. (Armine Avetisyan)
Nalaina tao amin'ny EurasiaNet.org ity lahatsoratra manaraka nosoratan'i Armine Avetisyan ity ary navoaka eto indray izany rehefa nahazoana alalana.
Nanoritsoritra ny toetran'ny fiarahamonina tsotra an'ireo mpiompy voromailala any Armenia ilay mpanoratra tamin'ny taonjato faha-19 Vahan Totovents tao anatin'ilay tantarany hoe “Voromailala.”
“Notondroin'ny olona molotra ireo mpiompy voromailala, ​​toy ny hoe mpangalatra na mpanao heloka bevava” izy ireo, hoy i Totovents nanoratra. “Tsy nisy nety nanolotra ny zananivavy ho an'ny zanakalahin'ny mpiompy voromailala mihitsy, ary tsy nisy ihany koa ny naka vady ny zanakavavin'ny mpiompy voromailala. Ary mbola nanadihady bebe kokoa izy ireo, mba hahazoana antoka fa tsy misy amin'ny fianakavian-drazazalahy na razazavavy no mpiompy voromailala . “
Nihomehy i David Shirvanyan rehefa nahatsiaro ilay fitenenana malaza. “Niova ny toe-tsaina ankehitriny, tsy misy intsony ny olona mitsikera anay. Manaiky anay ny fiarahamonina”, hoy ilay mpiompy voromailala 38 taona avy any Yerevan. “Na izany aza anefa dia tsy mamela ny zanako hiompy voromailala aho – toy ny aretina izany, ary tsy tiako izy ireo hiaina tahaka ahy, hikarakara ireny vorona ireny.”
Nanomboka tamin'ny faha dimy taonany no niompy voromailala i Shirvanyan, raha nahazo vorona ho toy ny fanomezana izy avy amin'ny havany iray. Latsa-pitia tamin'izany izy ary manana voromailala miisa 300 ankehitriny.
Ao amin'ny tsenan'ny vorona ao Yerevan izy no mivarotra, izay miasa amin'ny faran'ny herinandro, ary ahitana ireo biby atao sakafo na ompiana an-trano.
Manomboka amin'ny 5000 drams (10$ eo) ny vidin'ny voromailala iray. Ny vidim-boromailala iray lafo indrindra azon'i Shirvanyan dia 5000 dolara, kanefa misy ihany koa ireo izay heveriny fa tsy azo amidy. Vao haingana, hoy izy, nisy mpividy iray nikasa hanakalo Opel Astra iray vaovao ho an'ny voromailala tiany indrindra, saingy tsy nanaiky ilay tolotra izy.
“Na dia omena ahy aza ny vidin'ny tranobe mihaja iray any amin'ny Lalambe Avaratr'i [Yerevan] dia tsy hamidiko izany. Na dia misy manondro basy ny lohako aza dia tsy hamidiko izany. Tsy mino izany ny olona, kane​​fa rehefa mifandray amin'ny voromailala ianao, dia lasa toy ny zanakao mihitsy izany, “hoy i Shirvanyan.
Miomana amin'ny lohataona i Shirvanyan sy ireo mpiompy voromailala hafa, fantatra amin'ny hoe ghushbas amin'ny teny Armeniana. Io no vanim-potoana ho an'ny fifaninanana voromailala any Armenia, izay ahitana ireo ghushbases mampifaninana ny vorony tsara indrindra amin'ny voron'ny hafa mba hahitana ireo izay tena manidina maharitra ela indrindra.
Mandritra ny herinandro vitsivitsy ny fifaninanana, ary samy manana ny andro hanidinany ny voromailala tsirairay. 100 dolara isaky ny vorona no saran'ny fandraisan'anjara, saingy tsy izany no tena manan-danja, hoy i Shirvanyan: “Tsy manan-danja noho ny voninahitra ny vola: rehefa manana voromailala tsara ianao, dia mahazo voninahitra lehibe .”
Adiny 11 ora ny fanidinana tsara indrindra tao Yerevan. Raha toa ka latsaky ny adiny iray ny fahafahan'ny voromailala iray manidina eny amin'ny lanitra dia heverina ho manala baraka izany ary omen'ny tompony olona ilay vorona.
Manana fifaninanana ho an'ny voromailala ihany koa i Gyumri, tanàndehibe faharoa ao Armenia, saingy hafa ny azy ny fitsipika. Mora kokoa ny fifaninanana, eo anelanelan'ny 10 sy 20$ ny fandraisana anjaran'ny vorona tsirairay ary tsy ny tanjany no hitsarana ireo voromailala fa ny fahaizany manao fampisehoana amin'ny fanidinana.
“Foibe ara-kolotsaina ao Armenia ny tanàndehibenay, manome lanja ny hatsaran-tarehy izahay, ary ny hatsarantarehin'ny sidin'ny voromailala no miseho amin'ity tranga ity”, hoy i Ashot Metsoyan, ghushbas ao Gyumri , 65 taona. “Misy ny karazana tsambikina isankarazany atao amin'ny fikorisana amin'ny lagilasy, ary tsy maintsy manao tahaka izany ihany koa ny voromahailalanay.”
Tsy natao ho an'ny fifaninanana ihany anefa ny voromailala. Fa misy ihany koa ny fomba nentim-paharazana iray, izay mbola atao mandraka androany ao Gyumri, ary ahitana ny voromailala ho “vorona madio” mba hatao sorona rehefa misy zaza teraka na rehefa misy fianakaviana iray tsy maty fo aman'aina taorian'ny loza. Vonoina amin'ny alàlan'ny fanapahana ny tendany ny voromailala ary diovina sy hohanina ireo vorona avy eo.
Vidiana ho an'ny fampakarambady manerana an'i Armenia ihany koa ny voromailala, ary mamela ireo voromailala miisa roa hanidina ireo mpivady vao mba hisian'ny fiainana sambatra sy milamina.
Mpiompy voromailala ny dadaben'i Metsoyan, ary nanao toy izany ihany koa ny zanany lahy sy ny rahalahiny. Saingy tsy mbola niompy vorona mihitsy i Metsoyan raha tsy nisy ny horohorontany mandravarava tamin'ny taona 1988 tany Spitak, akaikin'i Gyumri.
“Maty ny raiko, ny zanako lahy, ny rahalahiko ary ny vadin'ny rahalahiko izay bevohoka,” hoy i Metsoyan. “Saika lasa adala aho. Saika namono tena aho. Tsy niraharaha na inona na inona aho.” Nivoaka ny tranony anefa izy indray andro, ary nahita tranom-boromailala iray izay toa hitany fa tsy ampy sakafo ireo vorona tao. “Nanindrona ny foko izany,” hoy izy nahatsiaro. “Nanapa-kevitra ny hanome sakafo azy ireo aho ary niova nanomboka tamin'io fotoana io ny fiainako.”
Nanombatombana i Metsoyan fa ankoatra ny fisotroan-dronony mitentina 36.000 drams isam-bolana, dia manokana 20 000 drams eo ho eo izy mba hamahanana ireo voromailala: “Tsy mampaninona ahy na mangetaheta sy noana aho fa tsy maintsy omena hanina kosa izy ireo.”
Tahaka ireo ghushbases hafa, nilaza i Metsoyan fa mbola tiany kokoa ireo vorona ireo noho ny tombontsoany ara-barotra.
Tsaroany raha nivarotra voromailala iray tamin'ny mpividy iray izay nitondra ny vorona ho any Tbilisi izy. Andro vitsy taty aoriana, niverina tany Gyumri ilay voromailala. “Nantsoiko ilay mpividy ary nilaza taminy aho mba hiverina haka ny volany, satria tsy te hijanona hiaraka aminy ilay voroko”, hoy i Metsoyan.
Ary nanondro ny voromailala mavo iray izy, izay nantsoiny ho ilay tiany indrindra. “Efa nampanantenaina trano, fiara, vola be aho fa tsy hamidiko mihitsy izy.”